आजको विश्वकपमा तपाई कस्को समर्थक ?
३१ जेठ, काठमाडौं । आजबाट रसियाको खेलमैदानमा विश्वकप फुटबलको सुभारम्भ हुँदैछ । शुरुवाती खेल नेपाली समय अनुसार राति ८ः४५ बजे समूह ‘ए’ अन्तरगतका रसिया र साउदी अरेबियावीच हुँदैछ । आम नेपाली दर्शकहरुमा चर्चा छ– कतापट्टि लाग्ने ? रसिया कि साउदी ?
विश्वकपमा कुन टीमको समर्थक बन्ने भन्ने विषय निकै नै अप्ठ्यारो छनोटको विषय हो । सवैले ‘म त फलाना टीमको समर्थक हुँ’ भन्न थालिसकेको अवस्थामा जो सुकैलाई पनि कोही न कोही टीमको समर्थक बन्न दबाव परिरहेकै छ ।
कुनै गेम हेर्न बसिसकेपछि एउटाको पक्ष लिनु स्वाभाविकै पनि हो । उदाहरणका लागि आज हुने रसिया र साउदी वीचको खेलमा दर्शकका रुपमा कुनै न कुनै टीमप्रति सहानुभूति त जनाउनैपर्ने हुन्छ । तर, कताको पक्ष लिने रसियाको कि साउदीको ? यो अप्ठ्यारो छनोट हो ।
काठमाडौंको गल्लीमा यतिबेला अर्जेटिनाको जर्सी लगाएर हिँड्नेहरुको संख्या बढेको छ । त्यसैगरी ब्राजिलको पहेंलो जर्सी अनि जर्मनीको सेतो जर्सी पनि देखिइरहेका छन् । गल्ली गल्ली चोक चोकमा यो टीम र त्यो टीम भन्दै नेपालीहरुवीच भनाभन सुरु भइसकेको छ ।
आखिर के आधारमा नेपालीहरुले अर्जेन्टिना, जर्मनी, ब्राजिल वा अन्य कुनैपनि टीमको पक्ष लिन्छन् ? यसको छनोटको आधार के हो ? के यसमा विशुद्ध खेलको सौन्दर्यले मात्रै काम गरेको छ कि अरु पनि राजनीतिक वा भावनात्मक पक्ष जोडिएको छ ? यो प्रश्नको उत्तर निकै गाह्रो छ ।
विश्वकपमा कुन टीमको पक्ष लिने भन्ने छनोटका पछाडि केही तर्कहरु पाइन्छन् । जस्तो कि धेरैले अर्जेन्टिनाको पक्ष लिनुका पछाडि मेस्सीलाई मन पराउनु, उनको फ्यान बन्नु अनि अर्जेन्टिनाको खेल प्रदर्शन राम्रो हुनु पनि हो ।त्यसैगरी रोनाल्डो, मुलर नेयमार वा अरु कसैलाई मन पराएकै आधार उनैको टीमको पक्ष लिने ट्रेन्ड पनि देखिएको छ ।तर, एउटा खेलाडी मन पर्दै उसैको देशको टीमलाई समर्थन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन भन्नेजस्तो मान्यता राख्ने मानिसहरु पनि छन् ।
उदाहरणका लागि खेललाई राम्रोसित बुझेका राप्रपाका नेता कमल थापाले व्यक्तिगत रुपमा मेस्सी, रोनाल्डो आदिको खेल मन परेता पनि आफू जर्मनको समर्थक रहेको बताएका छन् । तर, विश्वकपमा टीम छनोट गर्दा फ्यान वा राम्रो खेलाडि मात्रै हेरिँदैन । कतिपयले राजनीतिक विचारधारा, जात, क्षेत्र आदिलाई पनि आधारका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । फुटबल आफैंमा निवर्गीय सौन्दर्य बोकेको विश्वविख्यात खेल हो । यसले संसारलाई एउटा मैदानमा जोड्छ । तर, यसलाई हेर्ने मामिलामा दर्शकहरुको चश्मा आ(आफ्नै रंगको हुने गर्छ ।
जस्तै अर्जेन्टिनाले फोकल्याण्डमा गोर्खालीमाथि गोली चलाएको हुनाले म अर्जेन्टिनाको पक्षमा लाग्दिनँ भन्नेहरु पनि छन् । कोही चाहिँ म चे ग्वेभाराको फ्यान हुँ, त्यसैले उसको देश अर्जेन्टिनालाई समर्थन गर्छु भन्नेहरु पनि छन् । एउटा अफ्रिकन दर्शकले फ्रान्स र अफ्रिकी देशको टीमवीच फुटबल भइरहँदा पक्कै पनि फ्रान्सलाई समर्थन गर्दैन । युरोपको कुनै टीम र अफ्रिकाको टीमवीच खेल हुँदा अफ्रिकी दर्शकले युरोपेली टीमको समर्थन शायदै गर्ला । किनभने, त्यतिबेला अफ्रिकन दर्शकले युरोपले विगतमा अफ्रिकामाथि लादेको उपनिवेशवादको समर्थन गर्छ ।
कुनै मुस्लिम समुदायको दर्शकको हकमा पनि यही कुरा सत्य हुन सक्छ । जस्तो साउदीको टीमले रसिया वा अरु कुनै युरोपेली मुलुकसँग खेल भइरहँदा आफ्नै खाडी मुलुकलाई समर्थन जनाउने सम्भावना बढी रहन्छ ।
रसिया र अन्य कुनै देशवीच खेल हुँदा कम्युनिष्ट ह्याङओभर बोकेको कुनै नेपाली दर्शकले पुरानो सोभियतसंघ सम्झँदै रसियाको पक्ष लिने सम्भावना बढी हुन सक्छ । त्यस्तै कांग्रेसको छाता ओढेको दर्शकले रसियालाई छ्या भन्न पनि सक्छ । त्यस्तै दक्षिण कोरियाको टीमले खेलिरहँदा कुनै चिनियाँ दर्शकले दक्षिण कोरियाभन्दा विपक्षी टीमलाई समर्थन जनाउन सक्छ ।
खेलकुदमा कसको समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिले निकै ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता उदाहरणहरुलाई हेर्दा विश्वकपमा कुन टीमलाई समर्थन गर्ने भन्ने मामिलामा केही न केही ऐतिहासिक, राजनीतिक, एवं सामुदायिक भावनाले प्रभाव पारेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
तर, नेपाली खेलअनुरागीहरुमा भने अचम्मको छनोट विधि छ । धेरै नेपालीहरु दक्षिण अमेरिकाजस्तो साइनो सम्बन्ध नै नरहेका मुलुकका टीमहरुप्रति बढी क्रेजी देखिन्छन् । र, यही कारणले काठमाडौं र अन्य शहरका गल्लीमा ब्राजिल र अर्जेन्टिनाका जर्सीहरु बिक्ने गर्छन् । नेपालीहरुको यो छनोटमा जातीयता वा क्षेत्रीयता भन्दा पनि विशुद्ध खेल(सौन्दर्यप्रतिको भाव झल्कन्छ ।
विश्वकप फुटबलमा दक्षिण अमेरिकी देशहरुको उपस्थिति बलियो छ । त्यससँगै बलियो उपस्थिति भनेको युरोको हो । अफ्रिका विस्तारै अघि बढ्दैछ । र, एशियाको उपस्थिति त निकै नै कमजोर छ । उदाहरण यही नै पर्याप्त छ कि एशियामा आफूलाई पावरफूल ठान्ने चीन, भारत, पाकिस्तान, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, सिंगापुर कसैको पनि विश्वकप(२०१८ मा नामो निशाना छैन । नेपालको त कुरै नगरौं ।
यस्तो स्थितिमा अहिलेको विश्वकपमा एशियाबाट साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, इरान, जापान र स्वयं आयोजक देश रसियाले भाग लिइरहेका छन् । तैपनि नेपाल लगायतका एशियाली देशका फुटबलप्रेमीहरु ‘आफ्नो महादेश’ भन्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरु राम्रो एवं जित्ने टीम छान्छन् र दक्षिण अमेरिका एवं युरोपतिरै नजर लगाउँछन् ।